भा’गी विवाह गरेकाे २० दिनपछि युवती छाडेर युवक फ’रा’र, युवती गोठमा ब’न्ध’क ! – Khabar 27 Media
June 8, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on भा’गी विवाह गरेकाे २० दिनपछि युवती छाडेर युवक फ’रा’र, युवती गोठमा ब’न्ध’क !
यहाँको विष्णु गाउँपालिकामा एक युवती घ’रे’लु हिं”साको सि’का’र भएकी छन् । विष्णु–७ दुलबाका स्थानीयवासी शिवा राय यादवसँग भा’गी विवाह गरेकी युवती हिं”’सा’को सि’का’र भएकी हुन् । गत वैशाख ५ गते सर्लाहीबाट भा’गी बारामा बसेका युवक र युवती २० दिनपछि गाउँ फर्किए पनि युवकले आफ्नो घर जान नमानेपछि ती युवती हिं”साको सि’का’र भएकी हुन् ।
युवक र युवती दुवै जनाको सल्लाहअनुसार युवकले विवाह गर्ने भनी घरबाट लिएर भा”गेका थिए । तर २० दिनपछि गाउँ फर्किएर आफूलाई ‘तिमी मु’स’हर समुदायकी केटी हौ, तिमी आफ्नोघर जाऊ, म तिमीसँग विवाह गर्दिनँ’ भनी छा’डि’दिएको पीडित युवतीले बताइन् । आफ्नै घर जाँदा आमाबुवाले अस्वी’कार गरेपछि आफू शिवाको घर गएको तर शिवाको परिवारले आफूलाई प’शुचौ’पा’याझैँ ब’न्ध’क बनाएर राखेको पी’डि’त युवतीले बताइन् ।
शिवाको परिवारले ती युवतीलाई मु’स’हर समुदायकी युवती भन्दै दाउरा रा’ख्ने गो’ठमा विगत १० दिनदेखि ब”न्ध”क बनाएर राखेको उनको भनाइ छ । शिवाले ‘तिमी मुसहर समुदायकी हौ, तिमी यहीँ’ बस भनेर दाउरा राख्ने गो’ठघरमा छाडेर भा’गेको पी’डि’त युवतीले बताइन् । शिवा भा’गेपछि शिवाका परिवारले अहिले पी’डि’त युवतीलाई गो’ठमै राखेर ‘या”त”ना दिइरहेको सर्लाहीका दलित अगुवा महेश पासवानले बताउनुभयो ।
“जातीय छु’वा’छू’त समाजिक अ””प””रा”ध हो, प्रेम सम्बन्धले जा’त’पा’त देख्दैन तर यस्तो किसिमको जा’ती’य वि’भे’द हुनु भनेको द”ण्ड”नी”य अ”’प”रा”’ध हो”, अर्का दलित अगुवा राजेश पासवानले भन्नुभयो । भा’गेर २० दिनसँगै बस्न मिल्ने तर आफ्नो घरमा रा’ख्न नमिल्ने भन्दै पासवानले आ”क्रो”श व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली समाजमा दलितका छोरीको ज””वा””नी चल्ने तर दलितले छो’एको नचल्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको पासवानको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासनसँग दो”षीलाई य”था”शी”घ्र प”क्रा”उ गरी क”डा का”र”वा”हीको मागसमेत गर्नुभएको छ ।
यता युवतीले प्रहरीमा कि”टा”नी जाहेरी दिए प्र’च’लि’त कानूनअनुसार युवकलाई का”र”वा”ही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले बताउनुभयो । प्रदेश नं २ का अधिकांश जिल्लामा जाती’य तथा धार्मिक र व’र्गी’य परम्पराको अ’न्त्य नहुँदा यस्ता घ”ट”ना निरन्तर घ”टि”रहेको मा’न’वअ’धि’का’रवा’दी मुकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
कुकुरको पछि लागेर घना जंगलमा गएका बालक हराएपछि खोज्न ३ दिन लाग्यो कसरी वसे होला ति बालक, हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरियो
June 8, 2021 June 8, 2021 Shyam Lama
January 16, 2021 July 9, 2021 Shyam Lama